Real Madrid Oo Fasaxeysa Mid Kamid Ah Daafacyadeeda Muhiimka Ah
Home Horyaalka Spain Real Madrid oo Fasaxeysa mid kamid ah Daafacyadeeda Muhiimka ah
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay u ogolaato daafaca dambeedka midig ee reer Brazil Marcelo inuu u dhaqaaqo Juventus dhamaadka xilli ciyaareedkaan. Marcelo ayaa si dirqi ah uga hoos ciyaaray tababare Zinedine Zidane xilli ciyaareedkan waxana uu raadinayaa wakhti badan oo uu ciyaaro.
Marcelo ayaa halbowle u ahaa kooxda Real Madrid in ka badan 10 sano laakiin waxa uu hoos uga dhacay safka hore ee xilli ciyaareedka sababtoo ah soo bixitaankii Ferland Mendy. Haatan, waxay umuuqataa in Zidane uu diyaar u yahay inuu iska fasaxo laacibka reer Brazil, maadaama uu u arko inuu dheeri ku yahay shuruudaha Real Madrid.
Sida laga soo xigtay Todofichajes , Real Madrid ayaa diyaar u ah inay u ogolaato Marcelo inuu ku biiro Juventus lacag dhan 8 ilaa 10 milyan euro. Qandaraaska ciyaaryahanka reer Brazil ee Madrid wuxuu dhacayaa ilaa 2022, waajibna kuma saarna inuu ka tago Real Madrid xagaagaan, laakiin Los Blancos ayaa doorbideysa in Marcelo uusan si bilaash ah uga tagin dhamaadka xilli ciyaareedka soo aadan
Juventus ayaa lagu soo waramayaa inay dooneyso inay u soo bandhigto Marcelo qandaraas gaaraya ilaa 2023 iyadoo ikhtiyaar u ah hal sano oo dheeri ah iyadoo lagu saleynayo qaab ciyaareedkiisa kooxda. 32 jirkaan ayaa u istaagi doona inuu helo € 6 milyan sanadkii haddii uu aqbalo qandaraaska. Marcelo ayaa haatan kula jira heshiis 8 milyan oo euro ah laakiin kooxda Juventus ayaan doonayn in ay kordhiso dalabkeeda si ay u hesho xiddiga reer Brazil.
Marcelo ayaa caqli ku ahaan lahaa inuu aqbalo dalabkan, madaama Real Madrid aysan qorsheyneynin inay qandaraas cusub u soo bandhigto dhamaadka xilli ciyaareedkaan.
Ku biirista Juventus ayaa u oggolaan doonta Marcelo inuu la midoobo Cristiano Ronaldo.
Previous articleBarcelona Oo Dooneysa Saxiixa Alessandro Bastoni
Next articleFalanqaynta Kulanka Real Madrid Vs Real Sociedad ee Horyaalka Spain